Vazhinji vanondidaidza kuti Doug, nhasi vanga vari Baba | Martech Zone
Muvhuro, June 18, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mukuvimbika kwese, ini handina kuronga nguva yenguva iyi. Zvakaitika zvakadaro, zvakadaro, zvekuti ndinofanira kuigovana nemi mese.
Fred akawana boka rose revanhu vari mune tizzy munguva pfupi yapfuura paakabvunza nezve zera uye zvazvinoita patarenda rezvemabhizimusi. Yakapindirwa mukudzokera shure vaive Dave Winer, Scott Karp, Steven Hodson, uye nevamwe vazhinji avo Akadaro.
Ndakanga ndisina zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya iyi saka ndakataura zvishoma. Ini ndinotenda nzvimbo dzakasiyana siyana dzebasa uko vese vechidiki uye ruzivo varipo. Vechidiki vanhu vanowanzo tarisa kushoma kumiganhu saka kwavo kutsva kutaridzika uye kushaya kwekutya kunozvipa pachako kutora njodzi nekuuya nemimwe mhinduro hombe. Sezvineiwo, ini ndinofarira kufunga nezvangu ndiri mudiki 39 uye ndinogara ndichitaura uye ndichitsvaga dzimwe nzira huru pane zvakajairwa. Chiitiko, kune rumwe rutivi, chinowanzoenzanisa njodzi nemhedzisiro - kazhinji kazhinji zvichikanganisa njodzi.
SaManeja Chigadzirwa, njodzi yandinounza haisi chete nekambani yangu. Njodzi yandinofungidzira inopfuudzwa kune vatengi zviuru zvitanhatu vanoshandisa software uye nekuno kumakambani avo. Iyo piano yakanaka inorembera kubva padenga, saka ini ndoda kuve nechokwadi kuti tambo dzakachengeteka uye mapfundo akasungwa ese tisati tafunga kuamisa iwo munzvimbo.
Nhasi zvanga zvasiyana. Pandakaisa mimwe miganho nhasi pane zviwanikwa uye chirongwa, ndakatarisana nemumwe munhu achiseka achiti, “Zvakanaka, Baba!”. Kunyangwe zvaiitirwa kutuka, ini ndakazvinyudza zvinyoronyoro. Kana paine chinhu chimwe chete chandinodada nacho muhupenyu hwangu, chave chiri chikuru Baba.
Ndine vana vaviri vanofara, musapinda mumatambudziko .. ne mumwe akagamuchirwa kukoreji nehunyanzvi uye imwe yakanyanya kuhwina mubairo we "" Ghandi Award "pachikoro chake. Vaviri vane tarenda mumhanzi - mumwe achiimba, achiumba, uye achivhenganisa mimhanzi… mumwe wacho anonakidza mutambi uye muimbi.
Nekudaro, wangu mudiki wandaishanda naye pabasa angangodaro akauya nechimwe chinhu chakasiyana na "Baba". Ndinofarira izwi rekuti "Baba". Kana ndaita senge "Baba", pamwe inyaya yekuti ini ndaibata mamiriro anga achiyeuchidza nezvekuranga mwana. Zvinotoshamisa zvakakwana, ini kashoma kuti ndive nemamiriro ezvinhu aya nevana vangu
Izvi zvinoshandura maonero angu pane zera, bhizinesi, uye bhizimusi? Kwete. Ndichiri kutenda kuti tinoda kusatya kwevechidiki kusundira miganho yezvatinogona kuwana. Ini do tenda kuti vazhinji nyanzvi vanove vanoshivirira zvishoma nezera uye vanowanzo tenderera mukati memiganhu yakatarwa. Ndinoyemura vanopokana, asi ini ndichiri kutenda mukuremekedza, basa, uye miganhu.
Zvidzidzo zvandinodzidzisa vana vangu ndezvekuti ndakange ndiri kwavari kare, ndakakanganisa, uye ndinotarisira kupfuudza huchenjeri hwandakadzidza. Izvo hazvireve kuti ivo vanofanirwa kutevedzera tsoka dzangu, zvakadaro. Ini ndinoda chokwadi chekuti mwanasikana wangu ari pachikuva pazvakanditorera makore kuti ndiwane kuvimba ikoko. Ini ndinoda chokwadi chekuti mwanakomana wangu ari kuenda kuCollege pandakaenda zvisina chinangwa chekujoina Navy. Vanondishamisa zuva rega rega! Chikamu chacho ndechekuti vanoziva miganhu, vanondiremekedza, uye vanoziva vane rusununguko rwekuita izvo zvavanenge vachida (chero bedzi zvisingavakuvadze kana mumwe munhu).
Ndinovimba wangu "mwana" kubasa anogona kudzidza zvakafanana! Ini handina mubvunzo kuti achazokwanisa kushamisika iyo kambani uye ane simba rakakura, asi zvinhu zvekutanga kutanga… ziva nekuremekedza chiitiko chiripo uye unzwisise miganho. Mushure mekunge maita izvo, shamisika munhu wese nekupisa nzira nyowani munzira isina akambofunga nezvayo. Ini ndichakubatsira iwe kusvika ikoko! Mushure mezvose, chii chinonzi "Baba"?
PS: Gore rinouya, ndinoda kadhi reZuva raBaba… uye pamwe netai.
Jun 30, 2007 na8:18 AM
Unonzwika kunge mukomana anoziva kuumburuka nezvibhakera. Semukuru wedhipatimendi, ndinoona kuti vanhu vanoshanda pasi pangu vanokoshesa hunhu hwako. Nenzira, makorokoto pane zvawakaita vana vako.